ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခြင်း | စွန်းထင်ခဲ့သော မင်စက်များ
တခါတလေ ရစ်ချင်တဲ့ အခါ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဒုတိယအဆင့် စစ်ဆေးခြင်းဆိုပြီးတော့ ဘေးနားက အခန်းထဲကို ခေါ်သွားတတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်က Temporary Visit VISA နဲ့ လာတဲ့သူတွေကို စစ်ဆေးတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ COEသက်တမ်းကျော်နေရင်လည်း စစ်ဆေးတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လာရင်းကိစ္စကို အမှန်အတိုင်း ပြောပြရင် ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး။ တခါတလေလည်း Local Contact ကိုဖုန်ဆက်ကြည့်ပြီး ဟုတ်မဟုတ် စစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ်က မှန်မှန်ကန်ကန်ဆိုရင် ပြဿနာမရှိပဲ ဆိုက်ရောက်ကြောင်းLanding Permissionကပ်ပေးပြီး ဂျပန်နိုင်ငံကို ၀င်ခွင့် ပြုလိုက်ပါပြီ။
(ပြဿနာတစ်စုံတစ်ခု ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်လာခဲ့တဲ့ လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ပြန်လွှတ်ခံရတတ်ပါတယ်။)
Re-Entry VISAနဲ့ လာမယ့်သူတွေကတော့ Re-Entry Counter သက်သက်ရှိပြီး မြန်ပါတယ်။ လူလည်း နည်းတာကိုး။ Re-Entryအတွက်သက်မှတ်ထားတဲ့ (ဂျပန်က ပြန်တုန်းက ဖြည့်ထားပြီး Passportမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ကဒ်ပြားလေးမှာ နာမည်၊ လေယာဉ်အမှတ် စတာတွေကို ဖြည့်ထားတဲ့) Embarkation Card ကိုPassportကနေ ယူထားလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် Landing Permission ဆိုက်ရောက် တုံးထုပေးပြီး ထုံးစံအတိုင်း လက်ဗွေနဲ့ ဓာတ်ပုံ အရိုက်ခံပြီး ဂျပန်ပြည်ကို ၀င်နိုင်ပါပြီ။
လ၀က ကနေ အထွက် စက်လှေကားနဲ့ အောက်ကို ဆင်းပြီး ကိုယ့်အထုတ်ကို ယူပြီး အခွန်ကောင်တာကို ဖြတ်ရပါတယ်။ လေယာဉ်ပေါ်ကပေးတဲ့ အကောက်ခွန်စာရွက်မှာ ကိုယ်သိတာတွေ ဖြည့်ပြီး Green Channel မှာဘာအခွန်ဆောင်စရာမှ မရှိဘူးလို့ ပြောလိုက်ရင် များသောအားဖြင့် အစစ်အဆေးမရှိ ထွက်လို့ ရပါပြီ။
လေဆိပ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံလဲချင်ရင်လဲ ဖုန်းဆက်ချင်ရင် ဆက်ပြီး ကိုယ်သွားမယ့် ခရီးကို ဆက်ပြီး သွားနိုင်ပါပြီ။
This entry was posted on Wednesday, September 21st, 2011 at 12:59 pm	and posted in Living in Japan.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
« မီး နဲ့ ရေ
Alien Registration Cardပြုလုပ်ခြင်း »
One response to “ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခြင်း”